RW oo Dhuusamareeb uga qeybgalay xuska maalinta Haweenka, dibna ugu soo laabtay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
RW oo Dhuusamareeb uga qeybgalay xuska maalinta Haweenka, dibna ugu soo laabtay Muqdisho “SAWIRRO”
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Cumar Cabdirashiid Cali “Sharma’arke” iyo wafdi uu hoggaaminayay oo maalmahaan ku sugnaa gobolka Gagaduud ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa Dhuusamarreeb kulamo kula qaatay maamulka gobolka Galgaduud, madaxda dhaqanka iyo qeybaha bulshada oo uu kala hadlay arrimo badan oo ay ugu horeysa xoojinta dib-u-heshiisiinta iyo dhismaha maamulka Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Ra’iisul wasaaraha oo warbaahinta la hadlay inta uusan ka ambabixin Dhuusamarreeb ayaa tilmaamay inay guul ku dhamaatay booqashadiisa Galgaduud, waxaana uu xusay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay garabtaagnaan doonto dadaallada dib-u-heshiisiineed ee ka socda gobolka Galgaduud.
“Waxaa lasoo afjaray colaaddii waayahan ka taagnayd magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, shirka maamul u samaynta gobollada Mudug iyo Galgaduud uu furmayo marka uu dhammaado shirka dib-u-heshiisiinta ee ka socda Dhuusamarreeb”.ayuu yiri Mudane Cumar Cabdirashiid.
Ra’iisul wasaaraha intii uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb waxa uu kaga qeyb galay xuska maalinta Haweenka Adduunka oo lagu qabtay magaaladaasi, kaasi oo ay soo qaban qaabisay hay’adda Elman.
Fartuun Cabdisalaam Guddoomiyahay Hay’adda Elman ayaa uga mahadcelisay Ra’iisul wasaaraha ka qeybgalka munaasabadda ay soo qaban qaabiyeen, waxaana ay intaa ku dartay inay ku dadaalayaan sidii haweenka ay door muuqdo uga qaadan lahaayeen horumarka dalka.
Ra’iisul wasaaraha ayaa yiri “Xaquuq badan ayay haweenku leeyihiin, waan ku dadaaleynaa inay helaan xuquuqda, teeda kale dowladda xubno badan oo haweenka ah ayaa ku jira, waana sii dadaaleynaa”.